ခရုခရုသည်သင်၏အရေပြားဆဲလ်များကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည် - Afrikhepri Fondation
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2021
Uအဘို့အခရုရေညှိကိုသုံးပါ အသားအရေစောင့်ရှောက်မှု အသစ်မဟုတ်ပါ The Helix Aspersa Müllerရေညှိ (သေးငယ်သောမီးခိုးရောင်ခရု) ကိုရှေးခေတ်ကတည်းက "Mapuches" (ချီလီနှင့်အာဂျင်တီးနားတွင်နေထိုင်သော Amerindians) ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဒီခရုရေညှိသည်လက်ရှိတွင်အကြံပြုပါက၊ ကြွယ်ဝသောကောင်းကျိုးများစွာကြောင့်ဖြစ်သည် တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများ ရုပ်ပျို, ဓါတ်တိုး.
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များ (ချီလီနိုင်ငံရှိ COANIQUEM) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များအရ ၇၇.၇% သောအရာများတွင်ခရုရေညှိမှပြုလုပ်သောလိမ်းဆေးသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ အမာရွတ်များ et အစားထိုးခြင်းနည်းပညာ အဆိုပါစေသောမဟုတ် မီးလောင်ဒဏ်ရာ.
La ခရုရေညှိ အရေပြားကိုကောင်းမွန်စွာကုသရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသဘာဝဒြပ်စင်လေးမျိုးပါဝင်သည်။allantoin, les မွှား peptides, les အင်ဇိုင်းတွေ et les enzymatic glycoproteins ။
အဆိုပါallantoin အရေပြားပေါ်၌အရေပြားဆဲလ်များ၏ပြန်လည်သစ်လွင်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးဝက်ခြံများကိုလျှော့ချရန်၊ အမာရွတ်များလျော့နည်းစေရန်နှင့်အပူလောင်ခြင်းကိုကုသရန်ကူညီပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အရေပြား၏အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်နှေးကွေးလိမ့်မည်။
က Les မွှား peptides ဆဲလ်သေများနှင့်လမ်းပိုင်းအမှတ်အသားများကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အပြင်အသားအရေကို elasticity နှင့်ပျော့ပျောင်းမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။
က Les အင်ဇိုင်းတွေ အရေပြားဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သောသဘာ ၀ အနေဖြင့်ဖယ်ရှားပေးသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
က Les enzymatic glycoproteins ဆဲလ်တစ် tan ပိုဓါတ်ကိုပြန်လည်အသားအရေအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဗီတာမင် A, C နဲ့ E ကိုအသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အသားအရေအိုမင်းနှောင့်နှေး။
En အလှကုန်ပစ္စည်း၎င်းကိုအဓိကအသုံးပြုသည် အသားအရေစောင့်ရှောက်မှု။ အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံဖို့လိမ်းဆေးမှာတွေ့ရှိ အညိုရောင်အစက်အပြောက်, L 'ဝက်ခြံပုန်းများ, လိမ္မော်ခွံ၊ စီး et les အမာရွတ်များ.
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများကသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူများစွာ ၀ မ်းသာကျေနပ်မိကြသည်။ ခရု၏ပါးလွှာသောလိမ်းဆေးနှင့်ဂျယ်လ်များသည်သင်၏အရေပြားဆဲလ်များကိုပြန်လည်သစ်လွင်စေပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်။ : ဝက်ခြံ၊ အမာရွတ်အမျိုးမျိုး (ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ဝက်ခြံအနာ၊ အနာ)၊ အရေးအကြောင်းများ၊ မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်း၊ လိုင်းကောင်းများ၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊
၎င်း၏တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများ၎င်း၏ရုပ်ပျိုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဓါတ်တိုးကထူးခြားတဲ့သည်အနာပျောက်စေသောထုတ်ကုန်စေ။ အဆိုပါ 2000 နှစ်ပေါင်းခုနှစ်, COANIQUEM ချီလီနိုင်ငံ (မီးလောင်နေသောကလေးများအတွက်ဆေးခန်း) တွင်လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ခရုရေညှိပေါ် အခြေခံ၍ ခရင်မ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကိုအလုပ်ထုတ်ဝေသည်။ ရလဒ်များကိုအလုပ်ခွင်ကုထုံးယူနစ်အကူအညီပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုများကိုလူနာ ၃၆ ယောက်မှ ၁၈ ဦး ကိုခရုရေညှိနှင့် ၁၈ ခုကိုသမားရိုးကျစောင့်ရှောက်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခရု၏ Slime Cream သည်အရေပြားနှင့်သက်ဆိုင်သောတိုးတက်မှု၏ထင်ရှားသောရလဒ်များကိုပြသခဲ့သည်။ ၇၇.၇% သောရလဒ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ။ ခရမ်းချဉ်ရည်သည်အပူလောင်ခြင်းနှင့်အဂတိလိုက်စားမှုများကိုကုသရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Allantoin: အစွမ်းထက်သောအနာရောဂါငြိမ်းစရာဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးအသားအရေသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအရှိန်မြှင့်သောပစ္စည်းဥစ္စာ။ ၎င်းကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပြီးသက်သာစေခြင်း၊ Allantoin သည်အရေပြားတစ်သျှူးများပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည့် granulation နှင့်လည်းကူညီပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် allantoin သည် sebum secrerements ကိုထိန်းညှိပေးပြီး perspirant ဖြစ်သည်။
Glycolic acid: အရေပြားဆဲလ်သေများကိုဖျက်ပစ်ပြီးဖယ်ရှားပေးသည်။
ကော်လာဂျင်: ထို့ကြောင့်အနာရောဂါကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တစ်ရှူး elasticity တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုတင်းသည် epidermis ကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေသည်။
Elastin: ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောကိုယ်အင်္ဂါ၏ elasticity property ကိုပေးအပ်သည်။
ဗီတာမင်အီး: အရေးကြီးသောဆဲလ်များကိုကာကွယ်ပေးသော၊ အရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးအရေပြားကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသော antioxidant ဖြစ်သည်။
ဗီတာမင် C: အသားအရေအိုမင်း, ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်တစ်ရှူးအနာရောဂါငြိမ်းစရာအတွက်ကူညီပေးသည်။
ဗီတာမင် A: အသားအရေကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသည့်အခါအသားအရေကိုတင်းရင်းစေပါသည်။
သဘာဝပtheိဇီဝဆေးများသည်အရေပြား၏မျက်နှာပြင်နှင့်အဆိပ် (အခြားအရာများထဲမှဝက်ခြံဖြစ်ပေါ်စေသည့်) ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအရာများကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးရောဂါကာကွယ်ခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အကာအရံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
SOURCE မှ: https://www.consoglobe.com/bave-d-escargot-cosmetique-cg